photoshop မှာမြန်မာဘာသာ - MYSTERY ZILLION
November 2009 edited November 2009 in Photoshop
photoshop 7.0 မှာ မြန်မာလိုရေးချင်လို. ဘယ်နေရာကနေ ဖေါင်.ပြောင်းရမှာလဲ။ပြောပြပေးပါခင်ဗျာ။
Photoshop က 7.0 တောင်ရှိတယ်ဟုတ်လား
CS4 တို့ Editor တို့တောင် မနည်းသုံးနေရတာဗျ
you can use Unicode in PS7but you can use wininnwa for myanmar font.
CS4 is more higher than 7.0. PS7is out of date.
photoshop ၇.၀ ကနေ CS5ထိ မြန်မာလိုဖောင့်ပြောင်းတာ text tool ယူထားတုန်း